10 Fijery tsara tarehy indrindra any Eropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Fijery tsara tarehy indrindra any Eropa
(Last Nohavaozina: 01/05/2021)
Lohasaha maitso mankafy, lapa, ary tanàna mahafinaritra, Europe dia manana toerana mahavariana maro mitsidika. Ny toerana tokana sy tsirairay dia hahatonga anao hahatsapa fa niditra an-tsehatra ho mpirahalahy ianao’ Fairytales grimm, ary ny 10 ny fomba fijery tsara indrindra any Eropa no toerana mety indrindra amin'ny angano.
1. Ny fomba fijery kanto indrindra eto Frantsa: Ny Lohasahan'i Dordogne
Havoana maitso mavana, ilay renirano Dordogne manaitra, ary 5 tanàna mahavariana nahazo ny “tanàna tsara tarehy indrindra any Frantsa” award make the Dordogne valley’s one of the beautiful views in Europe. Castelnaud is one of the most charming castles in France, miorina amin'ny faritry ny vohitra mainty Perigord. Ireo tanàna ao amin'ny lohasaha Dordogne dia mbola tsy voakitika hatrizay, ary rehefa mandehandeha mamaky ny lalana sy arabe ianao, ho tsapanao fa nandeha niverina tany amin'ny jirama sy ny fotoana angano ianao.
Ny fomba fijery tsara indrindra any Frantsa dia azo idirana amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby. Afaka mampiofana ny dia avy any Bordeaux ianao ao anatin'ny latsaky ny 2 ora, na avy any Paris latsaky ny 6 ora. Ity faritra manaitra ity dia mendrika mihoatra ny dia iray andro izao.
Nantes mankany Bordeaux Train vidiny
Vidiny any Paris mankany Bordeaux
Lyon mankany Bordeaux Train Prices
Marseilles mankany amin'ny Bordeaux Train Prices
2. Vernazza, Làlana fitsangatsanganana an-tsambo Cinque Terre
Ny fahitana ny tanàna tsara tarehy Vernazza ao Cinque Terre dia iray amin'ireo 10 fomba fijery tsara indrindra any Eropa. Ity tanàna maro loko ity dia iray amin'ireo 5 tanàna mahavariana, ahitana ny faritra mahatalanjona ao Cinque Terre. Ireo trano tsara tarehy ao ambadiky ny Ranomasina Mediteraneana manga, mamorona fomba fijery toy ny sary hosodoko, tena mahavariana amin'ny filentehan'ny masoandro.
Azonao atao ny mijery ity fomba kanto ity avy amin'ny Cinque Terre tongotra lavitra lalana fomba fijery izay mampifandray ny rehetra 5 tanàna. Rehefa mitsangatsangana amin'ny làlana ianao, hahita tanimboaloboka ianao, sambo mpanjono, ary Cinque Terre amin'ny famirapiratany rehetra. Ny tsara indrindra dia ny mitsidika an'i Cinque Terre amin'ny lohataona sy fararano hatramin'ny fahavaratra dia somary mando ny fitsangatsangana, ary amin'ny ririnina dia mety ho voasakana ny lalana.
Ny vidin'ny zotram-piaramanidina Corniglia mankany Vernazza
Vidiny lamasinina mankany Florence ka hatrany Vernazza
Bologna mankany Vernazza Train Prices
Riomaggiore mankany Vernazza Train Prices
3. Ny fomba fijery mahatalanjona indrindra any Suisse: Rochers De Naye
Ny fomba fijerin'i Suisse nanome aingam-panahy horonantsary sy artista maro, ary rehefa mitsidika ny faritra Rochers De Naye sy Vaud ianao, ho azonao ny antony. Mandritra ny tampon'ny tendrombohitra Malatraix ny ankamaroan'ny mpitsangantsangana, raha ny marina dia misy fomba fijery manaitra kokoa avy amin'i Rocher-De-Naye.
Raha vao miakatra any ianao dia hijery ny Lake Geneva sy ny tampon'ny ranomandry ny Alpes Soisa any aoriana. Ity fomba fijery mahafinaritra any Rocher-De-Naye ity dia mety tsara amin'ny filentehan'ny masoandro na fitsangantsanganana raha maniry ny hihazakazaka maraina ianao.
Seranam-piaramanidina Lyon mankany amin'ny vidin'ny fiaran-dalamby Geneva
Zurich mankany Geneva Train Prices
Vidiny any Paris mankany Geneva
Sarany mankany Lucerne mankany Geneva
4. Faritra Mullerthal
Mullerthal Region has the loveliest views in Luxembourg. Rocky formations, riandrano, sy lalana maitso hisafidianana, paradisa an-tongotra io. Mullerthal dia matetika antsoina hoe Little Switzerland, misaotra ny tontolony mahatalanjona.
Ny fomba fijery tsara indrindra any Luxembourg dia i River Sure ao amin'ny valan-javaboary ambony-azo antoka. Afaka mankafy an'ity toerana mahatalanjona ity ianao amin'ny fitsangatsangana Làlana Mullerthal Trail 1. Ity lalana mandeha an-tongotra ity dia mandeha amin'ny kijana maitso, Lapan'i Tudor, fanaovana an'io ho iray amin'ireo 10 fomba fijery tsara indrindra any Eropa.
Antwerp mankany amin'ny vidin'ny fiaran-dalamby any Luxembourg
Brussels mankany amin'ny vidin'ny fiaran-dalamby any Luxembourg
Metz mankany amin'ny vidin'ny fiaran-dalamby any Luxembourg
Vidin'ny lamasinina any Paris mankany Luxembourg
5. Ny fomba fijery tsara tarehy indrindra any amin'ny Repoblika Czech: Tuscany Moraviana
Saha manodidina ny maintso toy ny landy, ny faritra Moravia any amin'ny Repoblika Tseky dia mahasarika. Maitso amin'ny fahavaratra, mamelana, ary maro loko amin'ny lohataona, ny lokon'ny Moraviana Tuscany dia miova miaraka amin'ny vanim-potoana amin'ny taona. Noho izany, isaky ny mandeha any Moravia ianao, hahazo fomba fijery hafa tanteraka momba ny kambana Tuscany ianao.
Ity fomba fijery manaitra any Eropa ity dia fitsangatsanganana an-tongotra avy any Prague. Ireo tanàna mahafinaritra an'i Sardice, ary Karlin sy Morave, manolora fomba fijery tsara indrindra amin'ny saha Moraviana.
6. Aotrisy, Alpbach
Trano fiompiana hazo any ambadiky ny tendrombohitra feno rakotra lanezy, Mahafinaritra ny tanàna Alpbach. Ny tanàna kely tsara tarehy any Alpbach dia miorina amin'ny iray amin'ireo faritra manaitra indrindra an'i Austria: Tyrol. Riandrano mahavariana, làlana fitsangantsanganana ho an'ny mpandeha an-tongotra za-draharaha na fianakaviana misy ankizy, misy fomba maro hizaha ny tontolo iainana Austrian sy ny natiora.
Ankoatry ny, afaka milentika any amin'ireo farihy mafana indrindra any Austria ianao, izay hita ihany koa eo akaikin'ity tanàna mahafinaritra ity. Ny fomba fijery tsara indrindra momba an'i Alpbach any Aostralia dia fohy fotsiny mitaingina fiaran-dalamby lavitra ny seranam-piaramanidina.
Vienna mankany amin'ny vidin'ny lamasinina Landeck Ischgl
Ny vidin'ny lamasinina mankany Munich mankany Landeck Ischgl
Salzburg mankany Landeck Ischgl Train Prices
Zurich mankany amin'ny Landeck Ischgl Train Prices
7. Ny fomba fijery tsara indrindra any Alemana: Neuschwanstein Castle
Ny lisitr'ireo fomba fijery manaitra indrindra an'i Eropa dia tsy ho feno raha tsy misy fahitana trano mimanda. Neuschwanstein Castle dia any trano mimanda mahavariana indrindra any Alemana ary manolotra iray amin'ireo fomba fijery majika indrindra any Eropa.
Ny fomba fijery malaza indrindra ao amin'ny Castle Neuschwanstein dia avy amin'ny tetezan'i Mary. Na izany aza, manjary feno olona izy ary saika tsy afaka maka sary avy amin'ny fomba fijery malaza. Ary noho izany, tokony hiakatra hatrany ianao colina ary lasa ny fomba fijerin'i Marienbrucke. Ny fomba fijery tsara indrindra any Alemana dia ny lalana zig-zag, avy amin'ny sehatra mimanda.
Dusseldorf mankany amin'ny vidin'ny lamasinina Munich
Dresden mankany Munich Ny vidin'ny lamasinina
Ny vidin'ny lamasinina any Nuremberg mankany Munich
Bonn mankany amin'ny vidin'ny lamasinina any Munich
Holland dia malaza amin'ny tulip sy ny rivotra, lakandrano, sy tanàn-dehibe mahafinaritra. Ary noho izany, tsy mahagaga raha ny iray amin'ireo fomba fijery tsara indrindra eto Netherlands dia samy manana. Raha tsara vintana ianao amin'ny dia amin'ny lohataona, tsy maintsy mitsidika ny tanànan'i Zaanstad ianao. Ho hitanao eto ireo valindrihana mihetsiketsika misy tulip mamony amin'ny loko rehetra amin'ny avana.
Bremen mankany amin'ny vidin'ny lamasinina Amsterdam
Hannover mankany amin'ny vidin'ny lamasinina Amsterdam
Bielefeld mankany amin'ny vidin'ny lamasinina Amsterdam
Ny vidin'ny lamasinina any Hamburg mankany Amsterdam
9. Ny fomba fijery tsara indrindra any Hongria: Gellertberg Hill ao Budapest
Ny fahitana ny parlemanta Hongroà dia iray amin'ireo sary malaza ao Budapest. Azonao atao ny misintona ity fomba fijery manaitra avy any Gellertberg Hill ity. amin'ny 235 M, ho hitanao ny Renirano Danube sy ny fahitana manaitra mahatalanjona an'i Budapest.
Amin'ny loko miloko volomboasary, jiro alina, na amin'ny andro lanitra mazava sy mazava, mahatalanjona ny fomba fijery. Noho izany, Ny fomba fijerin'i Gellertberg Hill dia nahatonga izany ho antsika 10 fomba fijery tsara indrindra any Eropa.
10. Chateau De Crevecoeur Ao amin'ny Dinant
Ny vohitra Dinant mahafinaritra dia iray amin'ireo tanàna manintona sy mampiavaka an'i Eropa. Ny fomba fijery tsara indrindra amin'ny Dinant, ny fiangonana, river, ary ny lohasaha Meuse dia avy any Chateau de Crevecoeur, Trano ratram-po.
Manjaka amin'ny tontolon'ny vatosokay, ity lapa mahavariana ity dia tsy mahita an'i Dinant hatramin'ny taonjato faha-13.
Bruxelles mankany amin'ny vidin'ny Dinant Train
Antwerp mankany amin'ny vidin'ny Dinant Train
Ghent amin'ny vidin'ny Dinant Train
Mialà amin'ny vidin'ny Dinant Train
The 10 ny fomba fijery tsara indrindra any Eropa dia havoana maitso, izay ny mpanonofy be herim-po ihany no sahy mandeha. Ny tena manokana, Ny fomba fijery eropeana dia miandry ireo izay mitady ny miavaka, toerana ivelan'ny lalana nokapohina, ary lavitra ny vahoaka.
eto amin'ny Save A Train, Ho faly izahay manampy anao handamina ny fialan-tsasatrao ho an'ny 10 fomba fijery tsara indrindra any Eropa amin'ny lamasinina.
Te hampiditra ny lahatsoratray bilaogy “Topy fijery tsara tarehy 10 any Eropa” ve ianao amin'ny tranokalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-viewpoints-europe%2F%3Flang%3Dmg Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana ny https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / ru ny / en na / de kokoa fiteny.
BeuatifulViewpoints BreathtakingViews EuropeByTrain Train Travel TravelingbyTrain hevitra